iClock - #1 म्याक विश्व घडी क्यालेन्डर टाइमर अलार्म | बेर अचम्मको
iClock - #1 म्याक विश्व घडी क्यालेन्डर टाइमर अलार्महरू
आवाश्यक हुन्छ: म्याक युनिभर्सल, म्याक ओएस १०.११-१२.०+
आईकलॉक - वर्ल्ड क्लक, क्यालेन्डर, अलार्म, संगीत, समय, मिति, चाइम्स, टाइमर, वर्धित उत्पादकता ...
पुरानो म्याक घडी मेनू बार अनुप्रयोग बदल्नुहोस्। आधुनिक समय प्रबन्धन र बृद्धि भएको उत्पादकताको लागि आईकलॉकमा स्टेप गर्नुहोस्। सुविधाहरू तुरून्त गुगल वा एप्पल क्यालेन्डर / घटनाहरू मेनूबारबाटै देखिन्छ। विश्वको सबै शहरहरू / समयक्षेत्रहरूको लागि वर्तमान समय / मितिको विश्व घडी। वाच रोक्नुहोस्, काउन्टडाउन घडी, चन्द्र चरण, फ्लोटिंग क्लकहरू, आईपी, मिति भिन्न क्याल्कुलेटर, एप्लिकेसन मेनू, अलार्म, ग्लोबल टेलिकोनफेसन शेड्युलर / समयक्षेत्र कन्भर्टर र 'लिनुहोस्' 'एक पोमोडोरो प्रकार ब्रेक टाइमर। ल्यापटप अलार्म स्टारबक्स वा एयरपोर्टमा प्रयोगको लागि। कुनै पनि ढाँचा, फन्ट वा रंगमा समय र मिति अनुकूलित गर्नुहोस्। आईकलॉक एक आवश्यक, संसाधन कुशल, म्याक ओएसको लागि आधुनिक अनुप्रयोग हो। पूर्ण रूपमा काम गर्ने संस्करण नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्। यसलाई नि: शुल्क प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं पुरानो म्याक मेनूबार घडीमा फर्केर जान सक्नुहुन्छ।
"आश्चर्यजनक बहुमुखी, सुपर अनुकूलन म्याक मेनू बार घडी" - जेआर बुकवाल्टर, म्याकवर्ल्ड अप्रिल, २०२०
"यो एक शानदार कार्यक्रम हो।" - लियो ल्यापोर्टे, म्याकब्रेक
वाह, धेरै राम्रो ... म iClock को साथ मजा गर्दै छु! - डेभिड पोग
iClock - #1 म्याक विश्व घडी क्यालेन्डर टाइमर अलार्म मात्रा
२० बर्ष सम्म एप्पलको निर्मित म्याक
मेनूबार घडी ठ्याक्कै यस्तै नै रहेको छ।
ठूलो घर जग्गा सम्पत्ति तर ... दु: खको कुरा, माथिको सबै यसले गर्छ
मानिसहरू अझ बढी चाहन्छन् पूर्ण - फिचर	उपयोगी	शक्तिशाली	सहमति	उत्पादक	FUN	म्याक घडी, त्यसो ...
यसले पुरानो एप्पल घडीलाई आधुनिक विश्व समय / मिति प्रबन्धन, उत्पादकत्व उपकरणको साथ बदल्छ? र तपाईको मेनूबारबाट ल्यापटप मोशन अलार्म।
प्रयोगकर्ता रेभ आईकलॉक बारे
"मेरो कामको रेखाको साथ, मलाई कहिले थाहा हुँदैन मेरो जागिरले मलाई कुन टाढाको कुनामा लैजान्छ। iClock को सरल, सहज अन्तर्क्रियाले मलाई कहिल्यै निराश तुल्याउँदैन। छिटो हेराईको साथ, म यो देख्छु म यो समय कहाँ हो भनेर ... । जहाँ म गइरहेको छु ... र जहाँ म भएको थिएँ। अर्को क्लिकको साथ, म मौसम मेरो अर्को गन्तव्यमा जाँच्न सक्छु। "
केविन राफर्टीदृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक "काल्पनिक चार: रजत Surfer को उदय",
"स्टार वार्स: एपिसोड I - प्रेत खतरा", "हराएको विश्व: जुरासिक पार्क" र अन्य धेरै चलचित्रहरू।
"मलाई आईकलोक प्रयोग गर्नु अघि 'किन म अर्को घडी चाहान्छु' भन्ने सोच्न मलाई सम्झना छ। अब म सोच्दछु कि 'यो बिना म कसरी गुज्रियो'।"
क्रिस्टोफ-भोगेलबुससीईओ, केप्ट प्रोमिस, सफ्टवेयर डेभलपर
"आईलकले समय बचाउँदछ! म फेरि प्लम अमेजिंगबाट एक अमूल्य उपकरण छेकें। iCock राम्ररी कार्यक्षमता र सुविधाहरूको सही सन्तुलन प्रदान गर्दछ। कुनै पनि उत्खनन - कुनै ब्लोट छैन; मेरो घडी प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि केवल एक आश्चर्यजनक सरल उपकरण, मेरो समय, मेरो म्याक
रान्ड मिलरMyst र Riven को सह-निर्माता
"यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि यति धेरै कार्यक्षमता 'घडी' मा प्याक गर्न सकिन्छ!"
केटा कावासाकी लेखक, ब्लगर, ईभान्जलिस्ट, र उद्यमी।
"मैले पाएको उत्तम समय !!!!"
चार्ल्स हेनरीPanTech Inc।
"मलाई आईकलोक मन पर्छ। यो केवल आकर्षक ढ designed्गले डिजाइन गरिएको मात्र होइन, यो वास्तवमै उपयोगी पनि छ। यसका सबै सुविधाहरू बाहेक, मैले खुल्ला अनुप्रयोगहरूको लागि ड्रप डाउन मेनू पुनर्स्थापित गरेको देख्दा म खुसी भए।"
जेम्स हेनरी रुबिनप्रोफेसर र कुर्सी, कला विभाग, न्यूयॉर्क को राज्य विश्वविद्यालय
"यो एक शानदार कार्यक्रम हो।" - म्याकब्रेक २261१ मा
लियो ल्यापोर्टTwit.tv र पोडकास्टरका सीईओ
"मलाई आईकलोकमा आकर्षण गर्ने सुविधा स्थान समय मेनू थियो। जब म विदेशमा सेवा कल गर्नु पर्ने हुन्छ म त्यो देशको कुन समय हो भनेर जान्नु आवश्यक छ। आईकलॉक सरल, गैर-अव्यवसायिक र द्रुत छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रोग्राम प्रयोग गर्नका लागि सरल तर उपयोगी। "
"आईकलॉक अद्भुत छ! तपाईले एप्पललाई सबै मशीनहरुमा समावेश गर्न साँच्चिकै प्रयास गर्नुपर्दछ! म खुशी छु कि मैले यो फेला पारे। धन्यवाद!"
"म अहिले आईकलोक बिना बाँच्न सक्दिन। मलाई यो मन पर्छ किनभने यो एकदम सरल छ, तर यती धेरै शक्तिशाली सुविधाहरू छन्। म के गर्न सक्दछु भनेर म निरन्तर छक्क पर्छु।"
म ह्याम रेडियो अपरेटर हुँ र मँ अन्यलाई जान्न चाहन्छु कि आईक्लोक हम्सको लागि उपयोगी सुविधाहरु प्रदान गर्दछ।
स्टीव हेलीयर (VA3SPH)
"मलाई अनुप्रयोग आईकलोक मनपर्दछ। सबै सुविधाहरू तपाईंलाई मनपर्दछन् र तपाईंलाई मन नपर्ने सुविधाहरू मध्ये कुनै पनि"।
एन्डी Ihnatkoहप्ताको पिक, म्याकब्रेक साप्ताहिक
कुनै पनि ढाँचा, रंग, फन्ट, आकारमा समय हेर्नुहोस्। अधिकको लागि क्लिक गर्नुहोस्
विश्वको कुनै पनि शहर वा समयक्षेत्रमा स्थानीय समय तुरून्त हेर्न समय मा क्लिक गर्नुहोस्
/ / पोमोडोरो टाईमर लिनुहोस्
भिजुअल र अडियो रिमाइन्डरहरूको साथ उत्तम पोडोडोरो टाइमरको साथ, आवश्यक ब्रेक लिनुहोस्।
तपाईंले छनौट, क्षितिजको लागि समय र मिति र घडीको पृष्ठ देखाउँदछ। वा ठाडो रूपमा तपाइँको डेस्कटपमा
ग्लोबल शेड्युलर *
बहु-समय क्षेत्र teleconferences व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न अत्यन्त नै उपयोगी उपकरण
आन्तरिक र बाह्य आईपी
क्लिपबोर्डमा आईपी नम्बर प्रतिलिपि गर्न हेर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्
पुनःआकारयोग्य क्यालेन्डर जुन तपाईं १ देखि १२ महिना देखाउन, फोटो थप्न, फ्लोट, डेस्कटपमा इम्बेड गर्न वा सामान्य विन्डोको रूपमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग प्रिन्ट गर्दछ।
स्वचालित गाढा मोड
सूर्यास्त र सूर्योदय वा तपाईंको अनुकूलन तालिकाको साथ गाढा / लाइट मोडको स्वचालित उपस्थिति। मेनुबारबाट मैन्युअली सेट गर्नुहोस्।
एप्पल द्वारा notarized
विकासकर्ताहरूको लागि भर्खरको एप्पल सुरक्षा सेवाहरूको प्रयोग गरेर notarized
यी विकल्पहरूको साथ
अधिक हेर्न कुनै आइकन ट्याप गर्नुहोस्
ICock डाउनलोड गर्नुहोस्
टेक / / पोमोडोरो टाईमर
Chimes र ध्वनि पुस्तकालय
शहरहरू र टाइम्सको मेनू
समय मेनू - मेनू आईटमहरू
मेनूबाट अलार्म सेट गर्नुहोस्
कुनै ढाँचामा मेनूबारमा मिति हेर्नुहोस्। तत्काल या त सानो वा ठूलो क्यालेन्डर हेर्न क्लिक गर्नुहोस्
यो अनुकूलन क्यालेन्डरको लागि मेनूबारमा मिति क्लिक गर्नुहोस् गुगल वा एप्पल क्यालेन्डरहरूसँग
कुनै मिति र समयको लागि काममा छिटो अलार्महरू। द्रुत पुन: प्रयोगको लागि बचत गर्नुहोस्
मेनुबारमा मून चरणहरू स्वचालित रूपमा देखाइन्छ
सबै प्रकारका घटनाहरूको समयका लागि एकदम सहि स्टपवाच
सम्झनुहोस् कसरी म्याक ओएस in मा अनुप्रयोगहरू र sys प्राथमिकताहरू पहुँच गर्न यो उत्तम मेनू थियो
१/1, १/२ र / वा घण्टा बिग बेन वा अन्य चिम्स सुन्नुहोस् (वैकल्पिक)
आईकलॉकले सिस्टम संसाधनहरूको एक न्यूनतम मात्रा प्रयोग गर्दछ
नयाँ वर्ष वा एक वार्षिकोत्सव जस्तै ठूलो कार्यक्रममा गणना गर्नुहोस्
पावर बिच्छेदन अलार्म बन्द सेट। स्टारबक्सका लागि महान, एयरपोर्ट
आईलक समय, मिति, अलार्म, क्यालेन्डरहरू, चन्द्र चरणहरू, काउन्टडाउन, स्टपवाच, चिम्स, फ्लोटिंग क्लकहरू, पोडोडोरो टाइमरहरू, एप्लिकेसन मेनू, बिगकल, टिनीकल, डार्क / लाइट मोडको स्वचालन, ग्लोबल समय तालिका, विश्व समय, ल्यापटप अलार्म र अधिक हो।
यो वर्णन गर्नु भन्दा यो प्रयोग गर्न सजिलो तरीका हो।
समय को प्रवाह मास्टर
तपाइँको औंलाहरूका टोकरीमा आईकलॉक आवश्यक उपयोगिताहरूको साथ
यसलाई नि: शुल्क प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
Mac म्याक ओएस मोजाभ (१०.१10.14) मा डार्क मोडको साथ महान काम गर्दछ।
Your तपाईंको एप्पल वा गुगल क्यालेन्डर छिटो मेनूबारबाट उपलब्ध छ
See २ प्रकारका क्यालेन्डर (सानो वा ठुलो क्यालेन्डरहरू) तपाईको तालिका र घटनाहरू हेर्न र सजीलो सम्पादन गर्न मद्दत गर्न मेनूबार र ड्र्याग्नेबल बिभिन्न साइजबाट पहुँचयोग्य।
The मेनुबारबाट स्थानीय ट्याप गर्न को लागी समय ट्याप गर्नुहोस् र कामको अनुकूलन योग्य मेनूमा विश्वका कुनै पनि शहरहरूको लागि महत्वपूर्ण जानकारी। सर्वश्रेष्ठ म्याकमा विश्व समय वा विश्व घडी।
Take 'लिनुहोस्' 'एक ब्रेक वा पोमाडोरो टाईमर हो अफिसका कामदारहरूलाई उठाउन केही मिनेट लिन र स्वास्थ्यको लागि व्यायाम गर्न केही मिनेट लिन सम्झाउन।
The दिन, मिति, र समय फरक फन्ट र रंग मेनू पट्टीमा छ
✓ ग्लोबल शेड्युलर: सबैको तालिकामा फिट हुन अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूको समय मिलाउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
Eggs मेनुबारबाट तुरुन्तै अलार्महरू सेट गर्नुहोस् अण्डा पकाउनको लागि, मिटिंगहरू, कार्यहरू वा वर्षगाँठाहरू
✓ काउन्टडाउन टाइमर, स्टपवाच, र तपाईंको डेस्कटपमा फ्लोटिंग घडीहरू
Ating फ्लोटिंग घडीहरू एनालग वा डिजिटल हुन सक्छ। एनालगसँग दर्जनौं क्लकफेसहरू छन्
All यी सबै मिनी-अनुप्रयोगहरूमा समय / मिति सबै अनुकूलित गर्नुहोस् एप्पल घडीले सक्दैन
Running एप्लिकेसन मेनूलाई मेनूबारमा थप्नुहोस् (ओएस in मा जस्तै) सबै चलिरहेका अनुप्रयोगहरू देख्न र तिनीहरूलाई स्विच गर्न अनुमति दिन
Laptop वैकल्पिक ल्यापटप अलार्म। ल्यापटप अलार्म सक्षम गर्नुहोस् र केही शक्तिशाली अलार्म ध्वनिहरू द्वारा सचेत हुनुहोस् जब तपाईंको पावर कर्ड विच्छेदन हुन्छ।
Big तपाईंको मनपर्नेमा BigCal रंग, आकार, आदि अनुकूलित गर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने फोटो थप गर्नुहोस् र तपाईंको भित्ता वा साथीहरूको लागि १ देखि १२ महिनाको क्यालेन्डर प्रिन्ट गर्नुहोस्।
Above माथिका सबै विकल्पहरू खोल्न वा बन्द गर्न सकिन्छ र सयौं तरीकाले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित गर्न सकिन्छ
आईलकॉक उत्पादकता बारे हो तर व्यापारको बारेमा मात्र होईन। बिग बेन वा कोयल घडी जस्ता ध्वनि प्रभावहरूको साथ चन्द्र चरणहरू, झंकारहरूको आनन्द लिनुहोस्। यो प्रयोग गर्न रमाईलो छ।
यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् भने यहाँ ट्याप गर्नुहोस्।
आईकलॉक प्रदान गर्दछ विश्व समय मेनू	अलार्म	Chimes	पात्रो	टाइमर	चन्द्र चरण	फ्लोटिंग डेस्कटप घडीहरू	ग्लोबल अनुसूचक	काउन्टडाउन / अप टाइमर	अनुकूलन समय / मिति	अनुप्रयोग मेनू	स्टडवाच	पोमोडोरो टाइमर	ल्यापटप आंदोलन अलार्म	अझै धेरै...
निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस्
तपाईंको जीवन को समय को लागी
तपाइँका सबै म्याकहरूमा उपलब्ध छन्
अपडेट र समर्थन को २ बर्ष
अहिले खरिद गर्नुहोस्
iCock पुरानो एप्पल को लागी आवश्यक प्रतिस्थापन हो
धेरै शक्तिशाली उत्पादकता सुविधा सेटको साथ मेनूबार घडी।
यो पनि तपाईं स्टारबक्स वा एयरपोर्टमा हुँदा एक ल्यापटप पावर डिस्कनेक्ट अलार्म छ।
आईलकॉक शर्लक्स एप्पलको मेनूबार घडी
- क्रेडिट को अतिरिक्त। ब्रायन फोस्टर द्वारा3ध्वनिको योगदान थपियो
- एप स्टोरमा पनि यो संस्करण पोस्ट गर्दै
- मेनुमा प्रदर्शनको लागि आईपी जानकारी प्राप्त गर्नको लागि स्रोत परिवर्तन गरियो।
- भर्खरको xcode को लागी कम्पाइल
- मोन्टेरी, इंटेल र एप्पलको m1 चिप्समा उत्कृष्ट काम गर्दछ
स्पार्कलमा एडसा लागू गरियो
- अस्थायी घडीहरूको समस्या (अघिल्लो दिनमा अडी रह्यो) मुद्दा
- यस संस्करणले अब समय र मिति मेनू प्रयोग गर्दछ, मात्र समय मेनू वा (नयाँ) ती छनौट चाहनेहरूको लागि केवल मिति मेनू। अब मात्र मिति मेनू प्रयोग गर्दा (समय मेनू बन्द) एक व्यक्ति प्रिफिस स्विच गर्न सक्छन् वा कि त bigcal वा tinycal मा प्रिफे आइकनबाट अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय र मिति दुबै बन्द गर्न सम्भव छैन किनकि यसले अस्थायी निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न गर्दछ। प्रयोगकर्ता tpol हामीलाई ईमेल गरे जस्तै २०२० मा उल्लेखित धेरै मुद्दाहरूको लागि एक अन्तर-आयामी अस्थायी फ्रैक्चर जिम्मेवार थियो। त्यो मुद्दा १/२०/२०१ addressed लाई सम्बोधन गरिएको थियो।
- अब समय मेनू र मिति मेनू रंग म्याक ओएस ११.० पछि परिवर्तन हुनेछैन। म्याक ओएस ११.० पछि यस मुद्दालाई फिक्स गरियो। जबकि रंग ११.० भन्दा तल म्याकोसका लागि सेताबाट कालोमा परिवर्तन हुनेछ किनकि ११.० म्याकोस मेनूबार पृष्ठभूमिमा सेतो छ र हामी सेतो पृष्ठभूमिमा सेतो पाठ देख्न सक्दैनौं।
- लाइसेन्स सजिलो बनाउनको लागि अन्य साना विविध परिवर्तनहरू।
सुझाव र अन्य प्रतिक्रिया बुझाउने प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद।
- इंटेल र एप्पल सिलिकॉन दुबैको लागि आईक्रलको पहिलो विश्वव्यापी संस्करण। आईल्क कोडमा परिवर्तन गरियो ताकि यसले नेटिभली ईन्टेल र एम १ म्याकमा चल्न सक्छ। यसको लागि परिणाम अनुप्रयोग एक विश्वव्यापी बाइनरी हो। आईकलक अब विश्वव्यापी छ!
- नयाँ उपयोगकर्ताहरूको लागि नयाँ अनबोर्डिंग किनभने म्याक ओएस ११ / बिग सुरमा परिवर्तनहरू छन्। मुख्य एक यो हो कि अब स्याउले एप्पल घडी प्रयोग गर्दछ मेनु बारमा खुला र बन्द सूचनाहरू। एप्पल घडी आईकनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसैले त्यहाँ दुई मितिहरू र २ पटक मेनूबार छैन। निर्देशनहरू अनबोर्डिंगमा र म्यानुअलको माथि छन्। नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि स्वचालित रूपमा अनबोर्डि open खुल्दछ तर आईकलक प्राथमिकताहरूमा कुनै पनि समय खोल्न सकिन्छ: सामान्य: उन्नत र ट्याप गर्दै 'ओपन अनबोर्डिंग स्क्रिन'
- अनुप्रयोगमा अन्य धेरै साना संशोधनहरू।
धन्यबाद र सबै आईकलक प्रयोगकर्ताहरुलाई नया सालको शुभकामना! समय परिवर्तन हुँदैछ।
- प्रणाली फोल्डरमा सार्नको लागि विकल्प स्थिर गरियो जुन म्याक ओएस ११ द्वारा टुक्रिएको थियो। अब फिक्स गरियो
- एक निषेध कार्य (nsbeep) अपडेट गरियो
- म्याक ओएस ११ बिग सुरको लागि अन्य साना सुधारहरू
- स्थिर म्याक ओएस ११ मुद्दा जहाँ मिति मेनु ट्याप भएपछि यो चयनमा रह्यो। (already.11.२ मा पहिले नै तय)
यदि तपाईंले भर्खरै स्थापना गर्नुभएको म्याक ओएस बिग सुर (म्याक ओएस ११) निश्चित स्थापना जानकारीको लागि म्यानुअल को शीर्ष मा हेर्न निश्चित गर्नुहोस्।
- म्याक ओएस ११ को लागि ठीक गर्नुहोस् जहाँ मिति मेनू ट्याप भएपछि यो चयनित रह्यो। अब स्थिर।
म्याक ओएस ११ को साथ आईकलोक प्रयोग गर्ने बारेमा थप जानकारीको लागि कृपया आईकलक म्यानुअलको माथि हेर्नुहोस्।
- स्थिर स्थान अनुमति मुद्दा जसले अनुमति संवादको सट्टा त्रुटि संवाद माथि ल्यायो।
- शहरहरू / देश डेटाबेसमा आइसल्याण्ड थपियो।
- शहर नाम समयक्षेत्रको साथ नयाँ plist थपियो।
- छिटो छनौटको लागि क्षेत्र सूची क्रमबद्ध गरियो
- Ui tinycal मा सुधार।
- - एप्पल र गुगल क्यालेन्डर बटन टिनीकलको माथि दायाँ सारियो। तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको क्यालेन्डरले देखाउँदछ। पात्रो खोल्नको लागि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। बढी सुविधाजनक। प्रयोगकर्ता द्वारा सुझाव
- - महीना को नयाँ प्रदर्शन संख्या ड्रपडाउन मेनू tinycal को माथि दायाँ शीर्ष दायाँ देखा पर्छ। बढी सुविधाजनक। प्रयोगकर्ता द्वारा सुझाव
- Tinycal ड्रपडाउन मेनू को नयाँ प्रदर्शन आकार tinycal को माथि दायाँ शीर्ष दायाँ देखा पर्छ। बढी सुविधाजनक। प्रयोगकर्ता द्वारा सुझाव
- tinycal को लागी month महिनाको क्यालेन्डर विकल्प जोडियो।
- Tinycal मा सबै पूर्वावलोकन अद्यावधिक। कर्सरलाई एक बटनमा होल्ड गर्नुहोस् यसले के गर्दछ हेर्नुहोस्।
धन्यबाद, प्रयोगकर्तालाई jon, ब्यारी र आफ्नो प्रतिक्रिया को लागी स्पष्ट।
- अल्पविराम अब नयाँ अनुकूलित मिति वा समय ढाँचा सिर्जना गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ
प्रयोगकर्ताहरू र एप्पलमा उनीहरूलाई आइकलकको बारेमा अरूलाई जानकारी दिनका लागि धन्यवाद। तपाईं ना का ओइ हुनुहुन्छ (तपाईं उत्कृष्ट हुनुहुन्छ।
- ध्वनिहरू (अलार्मका लागि) सबै वर्णानुक्रमित अब प्रयोगकर्ता सुझावमा आधारित। धन्यबाद!
- टिनीकल, ठूलो र जम्बोमा २ नयाँ आकार थपियो।
- घटनाहरु लाईन2लाईन बनाईयो
- घटनाहरू अब सुरू र समाप्ति समय छ
- या त २ 24 वा १२ घण्टा (AM / PM) समय प्रणाली सेटिंग्समा आधारित देखाउनुहोस्।
- [नयाँ] गुगल र एप्पल घटनाहरूमा समय थपियो। Tinycal मा एक घटना क्लिक गर्दा सानो मेनू क्यालेन्डरमा घटनाहरूको समय देखाउँदछ।
- नयाँ क्लाकफेस एक समूह जोडी एक उपयोगकर्ता को लागी धन्यवाद
- [नयाँ] अनुकूलन समय / मिति ढाँचा पृष्ठ प्रिफेहरूमा। समय वा मिति मेनूमा कुनै पनि समय वा मिति ढाँचा हुने अनुमति दिन्छ।
- [सुधारिएको] अब "सक्रिय क्यालेन्डर" मा एक वा बढी पात्रोहरू चयन गर्न सक्दछ।
- [स्थिर] कालो मोडमा फ्ल्याशिंग मेनू बारमा मिति गायब हुन्छ र पात्रो (TinyCal वा BigCal) पुनः प्राप्त गर्न क्लिक गर्दा पुन: देखा पर्छ।
- [फिक्स्ड] घटना सूची जुन टिनीकलमा मिति क्लिक गर्दा देखा पर्दछ कालो पाठमा डार्क मोडमा गाढा खैरो पृष्ठभूमिमा देखा पर्दा लगभग अदृश्य थियो। अब सजिलै देख्न सकिन्छ।
- प्रमुख संस्करण होईन। तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ। अधिकतर स्याउ स्टोर स्टोरका लागि
- एप्पल स्टोर र अन्य आईस्कल संस्करणहरू जसको बिभिन्न संस्करण नम्बरहरू अब संस्करण .5.5..XNUMX सँगै सि sy्क गरियो
- सदस्यता सुधार गर्दछ
- स्टारबक्स, एयरपोर्ट, आदिमा प्रयोगको लागि ल्यापटप शक्ति विच्छेदन अलार्म सुधार गर्न जारी छ।
- अन्य सुधारहरू विविध
- स्टारबक्स, एयरपोर्ट, आदिमा प्रयोगको लागि ल्यापटप शक्ति विच्छेदन अलार्म सुधार गर्दछ।
- Calalina संगत, म्याक ओएस १०.१10.15
- अन्य विविध सुधारहरू
- लेट, लामो र समय क्षेत्रको साथ साइटहरूको विशाल सूची थपियो। यो सूर्यास्त र सूर्योदय जानकारी ती शहरहरूको लागि अधिक सही हुन अनुमति दिन्छ।
- फ्लोटिंग क्लोक्स प्रिफ प्यानलको तल 'हॉट कुञ्जी' को विकल्प थपियो र pre प्रिफ प्यानेल लिनुहोस्।
- ui मा धेरै विविध सुधारहरू
- जब 'डकबाट हटाउनुहोस्' (सामान्य प्रिफ्समा) अनचेक गरिएको आइकलोक अब डकमा देखाउँदछ र अनुप्रयोग स्विचरमा हुनुपर्दछ।
- स्थिर मुद्दा जुन सूर्यास्त / सूर्योदयले पुरानो ल्याट, एलएनजी प्रयोग गर्दैछ। एप प्रक्षेपणमा नवीनतम ल्याट, lng प्राप्त गर्न अनुप्रयोग प्रतिनिधिमा कोड थपियो।
- अनुप्रयोग स्टोर संस्करण परिवर्तन
- भर्खरको डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी र नयाँ इमेक प्रो को लागी एप्पल लाई बधाई।
- सुधार गर्न '5 लिनुहोस्' ui। जब हामी त्यस अनुप्रयोगमा छौं त्यस बेला 'टेक फाइभ' जाज टुक्राहरू डाउनलोड गर्न सम्झनौं जुन डेव ब्रुबेक समूहले सुरु गरेको थियो र पॉल डेसमन्डले लेखेका थिए। यो एक ब्रेक लिन एक महान धुन बनाउँछ। यो उत्तम लम्बाई हो। तपाई पुश अप गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आँखा आराम गर्न विन्डो बाहिर हेर्नुहोस्, सूर्य नमस्कार (यूट्यूबमा हेर्नुहोस् यदि तपाई यस दिमाग / शरीर / श्वास / आत्मा अभ्याससँग परिचित हुनुहुन्न भने), वा बुर्पेज (youtube.com मा पनि उपलब्ध), आदि। यहाँ सूर्यस्या गर्ने स्वास्थ्य लाभहरु बारे एउटा सानो लेख छ जुन तपाईको क्युबिलमा वा तपाईसँग भएको खाली ठाउँमा सजीलै गर्न सकिन्छ।
- अनुमति प्यानेलमा रिसेट बटन हटाइयो
- क्यालेन्डर अब स्वचालित तवरले रिफ्रेस गर्दछ जब तपाईं मेनूबार क्यालेन्डरमा जानुहुन्छ: सानो क्यालो: क्यालेन्डर: एप्पल यो अब राम्रो काम गर्नु पर्छ सबैको लागि Apple वा google क्यालेन्डर टिनीकलको साथ।
- क्यालेन्डरमा अधिक सुधार।
फिक्स्ड मुद्दा - जब प्रयोगकर्ताले सानो मितिमा मिति क्लिक गर्‍यो, यसले मात्र घटना विवरणहरू देखायो <१ सेकेन्डको लागि। अब खुला रहन्छ।
- यी क्यालेन्डर प्रकारहरू सबै प्रदर्शित हुन्छन्, EKCalendarTypeLocal, EKCalendarTypeCalDAV, EKCalendarTypeExchange, EKCalendarTypeSubscription।
- अतिरिक्त ui परिवर्तन लिनुहोस् Take मा
निम्नलाई निश्चित गरियो।
- [फिक्स्ड] पहिलो पटक, एप्पल घटनाहरू क्यालेन्डरमा देखाइएको छैन।
- [फिक्स्ड] मुद्दा हल गरियो, क्यालेन्डरले काम गरिरहेको छैन, यदि आईक्लाउड सक्षम गरिएको छ।
- [फिक्स्ड] क्यान्डरका लागि TypeCalDAV (आईक्लाउड), TypeExchange र TypeSubscription विकल्प जोडियो।
- सुधार लिनुहोस् more. थप आउँदै ...
यदि तपाईं एप्पल क्यालेन्डर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कृपया यो परीक्षण दिनुहोस् यदि तपाईं आफ्नो खाताहरू देख्न सक्नुहुनेछ। कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस् कि यदि तपाइँसँग मुद्दा वा सिफारिश छ।
- फ्लोटिंग घडीहरूमा अजीब छाया निश्चित गरियो।
- क्र्यासलीटिक्सद्वारा रिपोर्ट गरिएको ल्यापटप अलार्ममा क्र्यासहरू स्थिर भयो
- प्रकाश / अँध्यारो मोड अनुप्रयोग स्टोर संस्करणमा फिक्स गरियो।
- अन्य साना फिक्सहरू।
- अब xcode १०.२ मा कम्पाइल गरियो
- storekit को साथ स्थिर मुद्दा
- सुधार गरिएको अनुमति प्यानल र यो आईटमहरू
- आईकलक अब notarized! अझै अर्को नयाँ एप्पल सुरक्षा सुविधा हामीले म्याक ओएस १०.१10.15 मा यसको आवश्यक हुनु अघि पहिले थपेका थियौं
- नयाँ ध्वनीको साथ थपिएको ल्यापटप अलार्म - अलार्म पत्ता लगाउँदछ यदि पॉवरसेबल डिस्कनेक्ट भएको छ भने चयनित अलार्म ध्वनि सुनिन्छ। केवल म्याक ल्यापटपमा प्रयोगको लागि उपलब्ध। हामी यस ग्यारेन्टीमा कुनै ग्यारेन्टी दिन्छौं तपाईंको ल्यापटप बचत हुनेछ। तपाईं आफैले यो परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अलार्मलाई हात दिनुहोस्, नयाँ आवाजहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस् र के हुन्छ भनेर हेर्न डोरी तान्नुहोस्। स्टारबक्सका लागि उपयोगी हुन सक्छ जब तपाईं रेस्टरूम :-) प्रयोग गर्नुहुन्छ वा हुनसक्छ यो तपाईंसँग लैजानु सुरक्षित हुन्छ। तपाईं निर्णय।
- नयाँ अनुमति प्यानल। अनुमति पाउँदा स्वचालित रूपमा पात्रो, स्थान र एप्पल घटनाहरूका लागि सामान्य संवादहरू ल्याउँदछ तर यस प्यानलले सही अनुमतिहरू सुविधाहरूमा पहुँच गर्न उपलब्ध छन् भनेर निश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
- स्थिर म्याक स्टार्टअपमा सँधै लग इन गर्नुहोस् "देखाउन एप्पल स्टोर संस्करण निश्चित गरियो।
- निश्चित महीना अन्धकार मोडमा टिनेकलमा देखाउँदैन।
- BIGCal का लागि नयाँ विकल्प थपियो। हप्ताको पहिलो दिन सेट गर्न सकिन्छ।
- BIGCal prefs अब सामान्य र स्टाइलिंग मा विभाजित
- गुगल वा एप्पल क्यालेन्डर use लाई प्रयोग गर्न छनौटहरूमा थपियो जुन न त हो
- फ्लोटिंग घडीहरूलाई स्तम्भमा मिलाउनुहोस्
- नयाँ लगइन आईटमहरू देखा पर्दा ठीक गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग लगइन आइटमहरूमा १ भन्दा बढी आईलक छ भने। आइकन बन्द गर्नुहोस्। प्रणाली प्राथमिकताहरूमा जानुहोस्: प्रयोगकर्ता र समूह: आईटमहरू लग ईन गर्नुहोस् र त्यहाँ सबै आईकलकहरू मेटाउनुहोस्। त्यसो भए आईकलोक सुरुवात गर्नुहोस् र आईकलोक प्राथमिकताहरूमा: सामान्य टर्न अन गर्नुहोस् (चेकमार्क) 'म्याक स्टार्टअपमा सँधै आईकलोक सुरू गर्नुहोस्'।
- अनुकूलन ढाँचामा देखा पर्ने गलत वर्णहरूको लागि ठीक गर्नुहोस्।
- अन्तिम संस्करणमा बिग्रिएको समय मेनूमा स्थानीय समय निश्चित गरियो
- क्यालेन्डरको छनौटमा कुनै पनि नगर्नुहोस्। कुनै पनि होइन, एप्पल, गूगल मेनूबारमा मितिमा जडान भएको पात्रोका लागि विकल्पहरू हुन्। यदि कुनै पनि छनौट गरिएको छैन भने जब मेनुबार मिति क्लिक गरियो कुनै पात्रो तल देखा पर्दैन।
- अनुकूलन ढाँचामा लेबलको साथ स्थिर अंकलाई नम्बरमा परिवर्तन गरिएको छ।
- अब दुबै एनालग र डिजिटल फ्लोटिंग घडिहरू मेनुबारको ठीक तल स्क्रिनको शीर्षमा जान सक्दछन्।
- अब सबै बटन रिसेट पूरी तरह से पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स को लागी अनुप्रयोग पुनःसेट गर्दछ। तपाईले अनुप्रयोगमा गर्नु भएका सबै अनुकूलनहरू, नयाँ समय र मिति ढाँचाहरू, आदि हराउन चाहानुहुन्छ। यो यस्तो स्थितिको लागि हो जहाँ तपाईं आईकनलाई पूर्वनिर्धारित गर्न रिसेट गर्न चाहानुहुन्छ।
- अनुकूलन मिति र समय को लागी सेटिंग्स अब नयाँ ढाँचा निर्माण गर्न अग्रणी 0's को प्रयोग को अधिक देखिने तरिकाहरू सामेल गर्दछ।
सबै महान प्रतिक्रिया को लागी सधैं ठूलो धन्यवाद! आइलक केवल अझ राम्रो र उत्तम हुन्छ।
- आईपी को & इन्टरनेट जानकारी अधिक लगातार र छिटो ताजा।
- सबै नयाँ सुविधाहरू समावेश गर्न अपडेट सबै वस्तुहरू रिसेट गर्नुहोस्।
- समय मेनूमा फ्लोटिंग क्लोक्स मेनू आईटमको अस्थायी डुपे
- सही फर्म्याटको लागि फ्लोटिंग घडिहरू फिक्स गर्नुहोस्
- झण्डा फ्लोटि cl घडीहरूको लागि फिर्ता थप गरियो
- अनुप्रयोग मेनू अब वर्णानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ
- मिति पछि स्पेसिंग र समय अघि अन्य मेनूबार आईटमहरूसँग अधिक समान बनाउँदछ
- अब सबै समय र मिति ढाँचाहरू क्र्यास बिना नै मेटाउन सकिन्छ।
- दिन विकल्पहरू ढाँचा ड्रप डाउन मेनूबाट हटाइयो।
- अन्य धेरै विविध। सुधार गरियो।
ती अन्तिम केहि को लागी लुडो को लागी धन्यवाद। आईकलकको बारेमा अरूलाई जानकारी दिनको लागि धन्यबाद यसले हामीलाई यो सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
- थपिएको समय र मिति ढाँचा एरिक मंडेल द्वारा अनुरोध गरिएको
- एप्पल र गुगल क्यालेन्डर पहुँच गर्नका लागि अनुमतिहरू सुधार गरियो
- tinycal मा क्यालेन्डर को आकार मा ठूलो आकार मा डाटा देखाउन निश्चित
- अज्ञात विकासकर्ता हस्ताक्षर मुद्दा समाधान। थप संवाद बिना अनुप्रयोग खुल्नेछ।
- महिना NAV बटनहरू र हालको महिना बटन bigcal मा थपियो
- हालको महीनामा जानको लागि bigcal मा 'c' ट्याप गर्नुहोस्, यी दुबै अनुरोधहरू प्रयोगकर्ता स्काउट sacker लाई धन्यवाद
- फ्लोटिंग घडीहरूमा AM / pm लाई लुकाउन / नयाँ लुकाउनका लागि। त्यो अनुरोध टम क्वेनबशलाई धन्यवाद। हो, त्यो उसको वास्तविक नाम हो। ऊ चाहान्थ्यो कि फ्लोटि clock क्लक फ्लोट माथितिर फ्लोट अरू केहि पनि नभई। अब तपाईंसँग तपाईंको डेस्कटपमा १ एनालग घडी सबै अनुप्रयोगहरू माथि फ्लोटिंग गर्न सक्नुहुन्छ। यो आईलकमा राम्रो थप हो।
- Apple अनुप्रयोग स्टोर संतुष्ट गर्न स्विफ्ट संस्करण नम्बर थपियो।
* तपाईंले आफ्ना साथीहरूलाई थाहा दिन चाहनुहुन्छ कि यदि तिनीहरूले एप्पल क्लक मात्र प्रयोग गरिरहेको छ भने उनीहरू हराइरहेका छन्।
- प्रकाश / गाढा ui परिवर्तन ठोस। यसलाई जाँच गर्नुहोस्
- परिवर्तन अनुकूलन मिति र समयको लागि अल्पविराम थप्न अनुमति दिन।
- अनुकूलन ढाँचामा समय र मिति बीच अधिक समरूप symetric ठाउँ। यो अन्तिम २ रिपोर्ट गर्नका लागि लुडोलाई धन्यबाद।
- शुरुआतीहरूको लागि नयाँ अनबोर्डिंग। आउनुहोस् उनीहरूलाई कसरी एप्पल घडी बन्द गर्ने बारे जान्नुहोस्। कमाण्ड ड्र्याग मार्फत कसरी आइलकलाई सार्ने।
- स्थापना जानकारी म्यानुअल मा पनि अद्यावधिक।
- अन्य विविध परिवर्तनहरू।
- एक अनबोर्डि screen स्क्रिन थपियो जुन केवल एक पटक शुरुआतीहरूलाई सूचित गर्न देखा पर्दछ कि तिनीहरूले मेनुबारमा दुई घडीहरू देख्न सक्दछन् जब तिनीहरूले आईलक शुरू गर्दछन्। २ 'एप्पल घडी हो र कसरी उनीहरू यसलाई बन्द गर्छन्।
- प्रकाश / गाढा मोड प्रिफ प्यानेलमा अन्तिम परिवर्तन। अब तपाईं त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअल (जुन तपाईं त्यहाँ स्विच गर्न सक्नुहुनेछ वा समय मेनूमा)। वा दुई स्वचालित मोडहरूमा, सूर्यास्त / सूर्योदय वा तालिकाबद्ध।
- फ्लोटिंग घडीहरू अब दोस्रो, आदि मोनिटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुझाव र बग रिपोर्टको लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो धन्यवाद। तपाईं बेर आश्चर्यजनक हो!
- काउन्टडाउन अलार्ममा ध्वनि सूचनाहरू थपियो
- प्रकाश / अँध्यारो मोडमा अन्तिम समायोजनहरू
- अब म्यानुअल वा स्वचालित रूपमा लाइट / गाढा मोड सेट गर्नुहोस्। म्यानुअली प्रिफे वा मेनू विकल्पमा सेट गर्न सकिन्छ। स्वचालित रूपमा स्थानीय सूर्यास्त / सूर्योदय वा प्रयोगकर्ता अनुकूलन तालिका मार्फत परिवर्तन अनुमति दिन्छ।
- अधिक उपयोगकर्ता ईन्टरफेस म्यानुअली र स्वचालित रूपमा प्रकाश / गाढा मोड स्विच को लागी जोडियो। म्यानुअल स्विच पूर्वनिर्धारित द्वारा अब छ।
- कम्पाइल गर्न परिवर्तन
- [नयाँ] म्याक ओएस १०.१10.14 अधिक उत्तम पूर्ण गाढा / हल्का मोड प्रयोग गर्नुहोस् यो आइलक सुविधाको साथ। म्यानुअल रूपमा कालो / प्रकाश मोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्, विशेष समयमा वा सूर्यास्त / सूर्योदयको साथ समिकरण गर्न। यसलाई चलाएर हेर्नुहोस् र तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
विचारहरु लाई राख्नुहोस्। सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद।
- थपिएको सूर्यास्त / सूर्योदय र अधिक खगोलीय समयहरू समय मेनूमा जब शहर चयन गर्दा र त्यसपछि सूर्यास्त / सूर्योदय। यो एक संवाद ल्याउँछ। भविष्यमा प्रिफ क्षेत्रमा एस्ट्रो जानकारीको लागि प्यानलमा परिवर्तन हुन सक्दछ।
- mojave गाढा मोडका लागि इजाजत पत्र संवाद पाठ निश्चित गरियो
- आइलकले क्यालेन्डरमा अब Mojave मा पहुँचको लागि सोध्न सक्छ र प्रयोगकर्ताले पहुँच प्रदान गर्न सक्दछ।
- अन्य फिक्सहरू।
राम्रो प्रतिक्रिया, सुझाव र समर्थन को लागी प्रयोगकर्ताहरुलाई धन्यवाद।
- chimes स्थिर
- ui ध्वनि देखाउनको लागि सुधार भयो
- यदि तपाईं आइकलक मन पराउनु हुन्छ र तपाईंलाई लगातार सुधारहरू मनपर्दछ भने, कृपया म्याकपडेट (यहाँ लग इन गर्न आवश्यक छ) मा एक संक्षिप्त समीक्षा राख्नुहोस्:
- सुझाव र टिप्पणीहरूको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो धन्यवाद
- गलत फिक्सहरूको साथ सानो अपडेट
- मेनू मा अलार्म समय अब ​​अपडेट।
- अब अनुकूलन मिति ढाँचाहरू उही तरीकाले मेटाउन सकिन्छ अनुकूलन समय ढाँचाहरू रातो x को उपयोग गरेर गर्न सकिन्छ।
- अनुकूलन मिति ढाँचा हप्ता को दिन गडबडी हुनेछ पूरै कस्टम मिति, अब स्थिर।
- अनुकूलन मिति ढाँचा फिल्डमा मेनू विकल्प चयन गर्दा मुद्दा फिक्स गरियो तब यसले टोकन नभएको पाठ जस्तो चयन गरिएको मेनू वस्तु देखाउँदछ।
- फ्लोटिंग घडीहरूमा दोस्रो सेकेन्ड सक्षम गरियो
- फ्लोटिंग घडीहरूमा, डिजिटल मोड अब देखाउँदछ जब त्यहाँ केही स्तम्भहरू पनि छन्
- कहिलेकाँही, तैरिरहेको घडिहरु बिर्सन्छन् फ्लोटिंग घडिहरु बीचको ठाउँ परिवर्तन गर्दा।
- पूर्वनिर्धारित गर्न पुनःसेट पनि फ्लोटिंग घडिहरू पुनःसेट गर्दछ।
- स्थिर: समय मा मेनूबार गाढा मोडमा रिसेट पछि देखाईएन।
- म्याक ओएस १०.१10.13 र नयाँ १०.१10.14 मा गाढा मोडमा थप सुधारहरू
- म्याक ओएस १०.१10.13 र १०.१10.14 मा गाढा मोड सुधार गरियो
- फ्लोटिंग घडिहरू निश्चित स्थानहरूमा समयको लागि फिक्स गर्नुहोस्।
- अधिक ui परिवर्तनहरू।
- नयाँ प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेको समय स्वरूपहरू अब मेनूबार र मेनूमा आईटमहरूमा प्रयोगको लागि समय मेनूमा थपिन्छन्।
- अनुप्रयोग स्टोरमा नयाँ iClock S अनुप्रयोग थपियो। यो सेयरवेयर आईकलॉक जस्तै हो तर सदस्यता संस्करण हो। व्यक्ति स्टोरको लागि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि, नि: शुल्क १ days दिन प्रयास गर्नुहोस् र ०.14। / महिनाका लागि सदस्यता लिनुहोस्। स्याउ यसको %०% हुन्छ।
- अनुप्रयोग स्टोरमा आईकलोक थपियो यो समान सुविधाहरू र मूल्य हो तर एप्पलले यसमा पनि कुल लागतको %०% प्राप्त गर्दछ। त्यसो भए, यदि तपाईं सिधा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ कृपया गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई आई-लक मनपर्दछ भने कृपया साथीहरूलाई जानकारी दिनुहोस्। यसले हामीलाई धनी बनाउँदैन तर यी परियोजनाहरूमा काम गर्न हामी सबैले गर्छ। समर्थनका लागि धन्यबाद, बग रिपोर्टहरू र सुझावहरू।
- नयाँ म्याक ओएस १०.१10.14 (मोजाभ) मा विशेष गरी डार्क मोडमा उत्कृष्ट काम गर्दछ।
- समय र मिति मेनूसँग उही मिति र समय ढाँचाहरूमा पहुँच गर्न फ्लोटिंग घडिहरू अपडेट गरियो।
- एक अलग आईकलोकको निर्माण जुन परीक्षण गर्न स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसपछि सस्तो सदस्यताका लागि एक पटक मूल्यको सट्टामा उपलब्ध हुन्छ।
- सबै प्रतिक्रिया र सुझावहरूको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद। यदि तपाइँले मौका प्राप्त गर्नुभयो भने कृपया macupdate.com मा एक समीक्षा राख्नुहोस् त्यहाँ अनुप्रयोग प्रिफ्समा यो गर्न लिंक छ। धन्यवाद
- ग्लोबल शेड्युलरमा UI परिवर्तन हुन्छ
- एप्पल स्टोरका लागि आईकलोकको सदस्यता संस्करण थपियो (यो स्वीकृत हुने बित्तिकै त्यहाँ रिलीज हुनेछ।
- अब फ्लोटिंग घडिहरूको लागि स्थान सेटिंग्स बहु मोनिटरहरूमा सम्झिन्छ।
- ठुलो क्यालेन्डर सेटिंग्समा फन्ट रंगको लागि पारदर्शिता / अस्पष्टता नियन्त्रण
- बिभिन्न मोनिटरहरू बीच फ्लोटिंग फ्लोकहरूलाई अनुमति दिन्छ।
- अनुप्रयोग स्टोर सबमिशनको लागि समाधान
- क्यालेन्डर आकार याद गर्नुहोस्
- समस्याहरूको बारेमा सोधेर सोधपुछको लागि UI परिवर्तन भयो र 'फेरि नसोध्नुहोस्' चेकबक्समा सुझावहरू दिनुहोस्।
- फेब्रिक एनालिटिक्समा आईकलक थपियो
- अन्य साना परिवर्तनहरू।
- अब तपाईं नयाँ फोटो चयनको अतिरिक्त बिगकलमा फोटो मेटाउन सक्नुहुन्छ।
- bigcal आकार सेटिंग याद छ। यसको मतलब जब तपाईं बिगकल क्यालेन्डरको साइज परिवर्तन गर्नुहुन्छ र यसलाई बन्द गर्नुभयो भने यसलाई फेरि खोल्ने अन्तिम आकारमा फर्किनेछ।
- फ्लोटिंग डिजिटल घडीहरू अब २ time घण्टा मोडमा सहि समय देखाउँदछ।
- अब bigcal prefs मा महिना को नाम को लागी रंग सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य प्रतिक्रिया महान सुझाव र सुझावहरूको लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद।
- आईलकमा: सामान्य प्राथमिकताहरू तपाइँ 'अपडेटहरूको लागि जाँच' सेट गर्न सक्नुहुनेछ दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक हुन।
- स्थान फाईलका लागि नयाँ फाइल पथ com.scripttsoftware मा अहिले लाइब्रेरीमा थियो: com.plumamasing.iClock मा अनुप्रयोग समर्थन
- प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सुधार र अलार्म को लागी दिन छनौट।
- लगइनमा सुरू गर्नुहोस् मेनूबाट हटाइएको र केवल आईकलकमा: सामान्य प्राथमिकता अब
- अब दिनको संख्या ठ्याक्कै ठूलो क्यालेन्डरमा सेट गरीएको corn कुनाहरू वा दिन वर्गको केन्द्र मध्ये कुनै पनि सेट गर्न सकिन्छ।
- अब पूर्ण वा संक्षिप्त छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। ठूलो क्यालोरीमा महिनाको नाम
- उन्नत प्रिफ पेजले सामान्य पृष्ठ बदलेको छ जसमा 'लगइनमा सुरू' भएको छ र 'अपडेटहरू जाँच गर्नुहोस्'।
- यदि २ hour घण्टा समय प्रणाली प्राथमिकतामा चयन गरिएको छ: language®ion यो अब डिजिटल फ्लोटिंग घडीहरूमा सही रूपमा देखाउँदछ।
- url योजनाहरू तय गरियो
- दिन संख्या स्थान सेट गर्न सकिन्छ। (अझै शीर्ष व्यक्तिहरूका लागि समाधान चाहिन्छ)
- दर्ता क्षेत्रमा ui परिवर्तन,
- अतिरिक्त गुगल र एप्पल क्यालेन्डर चयन बटनहरू हटाइयो।
नाम दर्ता क्षेत्र अगाडि थपियो
- निश्चित प्रणालीमा एप्पल र गुगल क्यालेन्डर बीच क्र्यास स्विचिंग।
- २ hour घण्टा समय प्रणाली प्रान्त: language®ion मार्फत छनौट गरियो
- लगइनमा सुरू गर्नुहोस् "अब आइकलोक प्रान्तहरूमा साथ साथै समय मेनूमा
- प्रिफेसको प्रत्येक पृष्ठमा संस्करण नम्बर र प्रकट गर्न क्लिकयोग्य छ
परिवर्तन लग पृष्ठ।
- अन्य विविध परिवर्तनहरू
कृपया प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।
- अब अतिथि खाताहरूमा काम गर्दछ
- रंग पिकरको लागि परिवर्तन गरिएको र color रूपान्तरण
- केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि लगइन मुद्दामा सुरू गर्नुहोस्
- स्थान चयनकर्ता यूआई सुधारियो
- bigcal का लागि पूर्वनिर्धारित रंग र पृष्ठभूमि छवि थपियो
- bigcal मा पृष्ठभूमि को सेटिं color रंग
- तस्विर बिगकाल क्यालेन्डरमा तान्नुहोस् र ड्रप गर्नुहोस् शीर्षमा फोटो थप्नको लागि। फोटो पनि चयन गर्न सकिन्छ र क्यालेन्डर प्राथमिकताहरूमा ढाँचा।
- ध्वनि प्राथमिकताहरू मार्फत अडियो आउटपुट पहिलो आन्तरिक स्पिकरहरूमा जान्छ।
- अन्य विविध Ui मा परिवर्तन हुन्छ।
पूर्वनिर्धारित र colorsहरू bigcal मा सेट गरियो
- फ्रेम अब सही रंग सेट गर्दछ
- फोटो आकार समायोजन गर्न bigcal मा ड्र्याग्बल डिभाइडर थप्नुहोस्, हो!
- धेरै नयाँ र उत्तम घडीहरू फ्लोटिंग घडीहरूमा थपियो, हो!
- अब अनुकूलन समय ढाँचा समय मेनू मा मात्र स्थान / शहरहरूको लागि समय ढाँचामा देखा पर्दछ
- अनुकूलन समय ढाँचाको लागि हटाइएको विकल्प थपियो
- bigcal मा तय फ्रेम र color
- अस्थायी घडीहरूमा डिजिटल घडीको लागि वर्ष चेकबक्स जोड्नुहोस्
- फ्लोटिंग घडीहरूले गलत मिति देखायो जब खुला छोडियो, फिक्स गरियो
- ओएस १०.१२ मा स्थिर क्र्यास जब बारम्बार मेनु वस्तुहरू छान्ने
- निश्चित समस्या बाह्य आईप अपडेट भएन जब नेटवर्क परिवर्तन भयो।
- मिति सारिएको मिति समान ठाडो रेखा हुन
- बहु लगईन आईटमहरू स्थिर
बिगकलका लागि पूर्वनिर्धारित र colorsहरू सेट गर्नुहोस्
- समय मेनूमा आईपी ठेगानाहरूको प्रदर्शन र शुद्धता सुधार
- धेरै अन्य परिवर्तनहरू, सुधारहरू, यूआई र बगहरू फिक्स गरियो।
सबै प्रतिक्रिया को लागी ठूलो धन्यवाद! यसलाई आउँदै गर
यदि तपाईं यसलाई स्वचालित रूपमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्न भने, plumamasing.com मा जानुहोस् र म्यानुअल रूपमा यो अपडेट स्थापना गर्नुहोस्।
- असंख्य यूआई परिवर्तनहरू।
- केहि मानिससँग क्र्याश प्राथमिकताहरू थिए, अब स्थिर।
- 'शहर र देशहरू' सूचीहरू प्रतिलिपि गर्ने क्रममा भएको त्रुटिलाई ठीक गरियो।
प्रिफ्स र bigcal प्रदर्शन
- एपकास्ट https मा परिवर्तन भयो।
- स्पार्कल (अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्) सुधार गरियो।
- लगइन आईटमहरू धेरै पटक देखा पर्दछ।
- धेरै अन्य विविध फिक्सहरू र सुधारहरू।
- यो संस्करण प्राप्त गर्न म्यानुअल डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
- स्थान र अलार्म मा धेरै ui परिवर्तन
- अलार्महरू मेनूबारमा देखिन्छ
- लिनुहोस् u ui सुधार भयो
- म्यानुअल परिवर्तन
- सम्पादन पछि स्थानहरूको ताजा गर्नुहोस्
- समय मेनू अब बन्द गर्न सकिदैन। यसले समय मेनू :-) मा प्राथमिकताहरूमा पुग्न प्रयास गर्ने प्रयोगकर्तालाई समस्या उत्पन्न गर्‍यो।
- आइकन अब टिनीकलमा एप्पल क्यालेन्डर सुरूवात गर्न को लागी एक जस्तै गुगल क्यालेन्डर सुरूवात गर्न।
सबै प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद। कृपया हामीलाई भन्नुहोस् यदि तपाईंसँग आइलकका लागि केहि राम्रो सुझाव छ।
- स्पार्कल फिक्सहरू
- अनबोर्डि t ट्यूटोरियलमा सुधार
- लिनुहोस् improved सुधारिएको छ।
- समय मेनूमा सबै शहरहरूको लागि समय अपडेट गर्न निश्चित गरियो
- Tinycal को निश्चित जम्पि
- धेरै लगइनहरू समस्या सिर्जना गरियो, जोल पार्कर द्वारा रिपोर्ट गरिएको, फिक्स गरियो।
- सक्रिय अलार्महरू अब तिनीहरू सबै सक्रिय छन् मेनूबारमा देखा पर्दछ।
- सम्भावित क्र्यासहरूको एक प्रकार निश्चित।
- पात्रोको उपस्थिति अब क्यालेन्डर वा चन्द्रमाको बायाँ किनारामा आधारित छ यदि त्यो विकल्प चयन गरिएको छ।
- पूर्वनिर्धारित मिति मेनु अब गाढा खैरोको सट्टा कालो।
आइक्लक फेरि एक पटक ठोस छ। अरूलाई यसको बारेमा थाहा दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
- अलार्म सक्रिय गरिसके पछि समस्याको अलार्म मेनू अपडेट गरिएको थिएन।
- निश्चित5मुद्दा।
- समय मेनू कोड तल मेनु वस्तुहरू हाइलाइट नगरी ठीक गर्न पुन: लेख्न र केहि म्याक्समा क्र्यास।
- Tinycal र bigcal बीच स्विच, क्यालेन्डर अब स्क्वाश छैन।
- अलार्म ui सुधार भयो।
आईकलॉक प्रयोगकर्ताहरू, हरेक दिन अपडेट गर्न आवश्यक पर्दैन र हरेक पटक हामी नयाँ संस्करण उत्पादन गर्दछौं। केहि मानिसहरु का प्राथमिकताहरु खोल्न क्र्यास थियो। यदि तपाईंसँग त्यो मुद्दा थियो र यस संस्करणले फिक्स गर्यो भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
यदि तपाईं समस्या देख्नुहुन्छ वा सुझाव छ भने अब हामीलाई थाहा दिनुहोस् समय हो।
- निश्चित पात्रो जूम समस्या जब डक दायाँ वा बायाँ तिर हुन्छ
- TimeMenuFix मा मर्ज। प्रत्येक मेनू आईटम सम्मिलनमा टाइममेनू अपडेट गर्नुहोस्।
- अनुप्रयोग मेनूमा निश्चित मुद्दा। अनुप्रयोग मेनू चलिरहेको संस्करणमा जान प्रयोग गरियो तर अब गर्दैन। प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट गरिएको
- फ्लोटिंग घडिहरूमा दिन र मिति देखाउन / लुकाउन एनालग घडीको लागि सेटिंग थप्दछ। प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट गरिएको
- निश्चित मुद्दा, प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट गरिएको डार्क मोडमा फन्ट आकार र मेनु वस्तुको रंग परिवर्तन भएन।
- निश्चित अनुप्रयोग आइकन डकमा देखाइएको छैन।
- केही म्याकमा निद्रा पछि क्र्यास रोक्नको लागि समाधान थपियो।
- महीना १ fixed लाई सीमा रेखाबाहिरको कन्सोल लगमा देखा पर्ने ह्रास विधिलाई बदल्दै महीना १ लाई तय गर्यो।
- स्थान / शहरहरूको लागि पदानुक्रम मेनूको तल 'सम्पादन स्थान' थपियो।
- 'सेट टाइम زون' प्रिफे पृष्ठमा समयक्षेत्रहरूमा थप जानकारी थपियो
प्रिफेसको प्रत्येक पृष्ठमा ट्याप गरेर मद्दत लिंक थप गर्नुभयो? आइकन
- अस्थायी घडीहरू जाँच जब सम्झना सेटिंग र पुन: शुरू मा देखा पर्दछ।
- समय मेनूमा परिवर्तनहरू
- "मेनू क्यालेन्डर" नाम "मेनूबार क्यालेन्डर" को साथ बदलियो।
- निश्चित तातो कुञ्जीहरू।
- एप्पल क्यालेन्डरहरू छनौटमा क्र्यास फिक्स गरियो, जब एप्पल क्यालेन्डर पहुँच प्रदान गरिएको छैन। iCock लाई प्रणाली प्राथमिकताहरू: सुरक्षा र गोपनीयता प्यानलको क्यालेन्डर क्षेत्रमा थप गर्नुपर्दछ। म्यानुअल मा अधिक।
त्रुटि सन्देश देखाउनुहोस्, यदि प्रयोगकर्ताले एप्पल क्यालेन्डर पहुँच प्रदान गरेको छैन।
- निश्चित मिति मेनू पृष्ठभूमि केहि व्यक्तिहरूको लागि सेतो देखिन्छ
विश्लेषकहरू मार्फत त्रुटिहरू फेला पार्न अनुमति दिन कोड थपियो
- क्र्यासलिटिक्समा रिपोर्ट गरिएको क्र्यास फिक्स गरियो।
- यसलाई सिमेट्रिक बनाउनको लागि स्थान मेनू र color र फन्ट मुद्दा फिक्स गरियो।
त्यहाँ क्र्यास (अनुप्रयोग बन्द) हुन्छ जुन केहि व्यक्तिको लागि हुन्छ (हामीलाई दुर्भाग्य छैन) जुन स्थिर हुन सक्छ। यदि तपाईं यो प्राप्त र एक क्षण छ, कृपया हामीलाई एक रिपोर्ट पठाउनुहोस्, यसलाई पढ्नुहोस्:
र हामीलाई केहि विवरणहरू र क्र्यास लग पठाउनुहोस्। धन्यवाद
- निश्चित तातो कुञ्जीहरू
- संसूचक प्राथमिकताहरु बाट आवाज छान्दा क्र्यास ठीक भयो र तुरुन्तै अन्य दृश्यहरुमा सर्नुहोस्।
- ग्लोबलशेलुलरमा ढाँचा सुधार गरियो जब ईमेल पठाउँदै।
- अझै पनी एक मुद्दमा काम गर्दैछ जुन समय मेनूको तल काट्छ
- टेक for को लागि सुधार गरिएको यूआई। नयाँ मेनूहरू। प्रत्येक नयाँ संस्करणको साथ स्वत: सुरू हुँदैन।
- सानो परिवर्तन।
- tinycal अब क्यालेन्डर अन्तर्गत देखा पर्छ।
- ग्लोबल शेड्युलरसँग जोडिएको क्र्यासको लागि समाधान गर्नुहोस्।
- Ui solidifies
कृपया हामीलाई तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् (बगहरू र सुझावहरू)। धन्यबाद!
- ग्लोबल शेड्युलरका लागि फिक्सहरू
- मेनु क्यालेन्डरमा टिनीकलका लागि फिक्सहरू।
कृपया यदि तपाइँ कुनै मुद्दा फेला पार्नुभयो, सुझाव वा मुद्दा हामीलाई बताउनुहोस्। एक स्क्रीनशट लिनुहोस्। केहि विवरणहरू लेख्नुहोस् र यसमा पठाउनुहोस्। info@plumamazing.com धन्यवाद!
- धन्यबाद धन्यवाद!
- यदि तपाईं अघिल्लो संस्करणसँग खुसी हुनुहुन्छ र नयाँ संस्करण जाँच गर्न चाहनुहुन्न (जसमा दुईवटा बेटा सुविधाहरू छन्) भने नयाँ संस्करणका लागि एक हप्ताको लागि रोक्नुहोस्। अन्यथा रमाइलो गर्नुहोस्
- यस संस्करणमा आइलकले १ नयाँ क्यालेन्डरलाई बीटा परीक्षण गरिरहेको छ, टिनीकल भनिन्छ जसले एप्पल क्यालेन्डर र गुगल क्यालेन्डर दुबै समर्थन गर्दछ!
- [बीटा] एप्पल क्यालेन्डरको लागि आईकलोक टिन्याकल समर्थन
- [बीटा] गुगल क्यालेन्डर + अतिरिक्त क्यालेन्डरहरूको लागि आईलक लक टिनिकल समर्थनमा।
- [बीटा] - विश्वव्यापी तालिका, विश्वका सबैका लागि उपयुक्त समयमा टेलीकॉन्फरेन्सको प्रबन्ध गर्ने एउटा तरिका।
- अन्य फिक्स र सुधारहरू।
Betas केही कार्यक्षमता हराइरहेको हुन सक्छ (समाप्त नभएको) तर तपाईं तिनीहरूलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
अपडेट u लिनुहोस्। take लिनुहोस्। take लिनुहोस्। एक व्यक्तिलाई डेस्कमा काम गर्दा ब्रेक लिन सम्झाउछ र ब्रेक, ब्रेक समय र दोहोर्याउने समयको बिचको समयका लागि अनुकूलन योग्य छ।
-5लिनुहोस् ब्रेक स्टार्ट र ब्रेक स्टपको लागि आवाजहरू छन्। प्रणाली, प्रयोगकर्ता रेकर्डि।, special विशेष ध्वनी र उपयोगकर्ता लाइब्रेरी लिनुहोस्। यसले mp5 को समावेश गर्न सक्छ
- मिति मेनूबार आईटम अब कालो मोडसँग कार्य गर्दछ जस्तै समय मेनूबार वस्तु पहिले नै गर्दछ।
- अन्य विविध सुधारहरू।
- यदि त्यहाँ कुनै सुविधाहरू छन् जुन तपाई हेर्न चाहानुहुन्छ, अब समय हो सोध्नु।
- समय मेनूमा रंगको लागि गाढा मोडमा पनि राखिन्छ।
- समय प्रारूप जेनेरेटर मा सुधार।
- अधिक ध्वनीहरू उपलब्ध छन् र chimes को लागि क्रमबद्ध, take र अलार्म लिनुहोस्।
- new नयाँ ध्वनी थपियो ब्रायन फोस्टर को लागी
- मेनूबार छायाको लागि ड्रप छायालाई तलबाट पाठबाट तल जान परिवर्तन गरिएको थियो।
- मिति ढाँचा जनरेटर। क्षेत्र अनुकूलित गर्न नीलो गोली बनाउँनुहोस्। प्रत्येक ड्रपडाउन मेनू छुनुहोस् महीना, दिन, आदि को लागी धेरै ढाँचा मध्ये एक मा सेट गर्न।
- समय ढाँचा जनरेटर। अझै उत्तम छैन।
- अधिक ध्वनि र imovie ध्वनी थप5र अलार्म लिन
- समय मेनूमा, शहरसँग विकीपीडिया, मौसम, वुल्फ्रामलफा, गूगल वा नक्शाहरूमा त्यस शहरको लागि खोल्न / खोजी गर्न क्रमबद्ध मेनू छ।
- लिनुहोस् works राम्रो काम गर्दछ। एक पटक प्रान्तमा सेट गरिएको समय मेनूबाट खोल्न र बन्द गर्न सक्दछ। अझै सही छैन। हामी तपाईंको सुझावहरू सुन्न चाहन्छौं।
- धेरै अन्य ट्वीकहरू
- अझै पनि अँध्यारो मोडमा पाठको लागि कुनै रंग छैन। त्यो आउँदैछ।
- काउन्टडाउन टाइमर थपियो। घटनाको x घण्टा भित्र रातो रातो मोड्ने क्षमताको साथ बढाइएको।
- क्यालेन्डर अब एक महिना, months महिना वा १२ महिनाको साथ सानो खोल्न सेट गर्न सकिन्छ। त्यसो भए तपाईंको मोनिटर वा मनिटरहरू जत्तिकै ठूलो। डेस्कटप वा सँधै अगाडि रहेको विन्डो वा नियमित विन्डोमा सेट गर्न सकिन्छ।
- अधिक आउन।
- .3.5.7..3.5.6. with को साथ मुद्दा अहिलेका लागि XNUMX..XNUMX.। मा सारियो।
- क्यालेन्डर प्रिफेमा अधिक प्राथमिकताहरू
- पात्रोमा अधिक सुविधाहरू
- काउन्टडाउन अब काउन्टडाउन प्राथमिकताहरूमा फेला पर्दछ।
- हामी तपाईंको सबै सुझाव र बग रिपोर्टको कदर गर्दछौं।
- नयाँ म्यानुअल। काउन्टडाउन टाइमर र क्यालेन्डरमा नयाँ जानकारी छ। आईलकमा बढि ध्वनि पाउने बारे विवरण। यसलाई जाँच गर्नुहोस्।
- अनुकूलन मिति
- काउन्टडाउन घडीमा सुरू गर्नुहोस्
- पात्रोमा अधिक लचिलोपन र प्रिफ्स
- नयाँ म्यानुअल
- नयाँ मिति ढाँचा थपियो
- अद्यावधिक डाउनलोडहरूका लागि जाँच गर्नुहोस्, झिक्नुहोस् तर स्थापना गर्दैन। नयाँ संस्करणहरूको म्यानुअल स्थापना अझै आवश्यक छ।
- आईलक आईटमहरू अब मेनूबार गाढा मोडमा देखाउँदछ
- अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् अब प्रिफेहरूको बारेमा पृष्ठमा र आईकलक मेनूमा।
- लिनुहोस्,, पोमोडोरो वा ब्रेक टाइमर जस्ता कार्य गर्ने सुविधा सुधारिएको छ। ui राम्रो र बगहरू स्थिर।
- प्रयोगकर्ताहरू जसले अनुप्रयोग प्राप्त गर्छन् र खोल्दा यो अनुप्रयोग फोल्डरमा हुँदैन, यसले अनुप्रयोगलाई अनुप्रयोग फोल्डरमा बचत गर्न चाहान्छ कि भनेर सोधिन्छ प्रयोगकर्ताहरूलाई एक कदम बचत गरेर र तपाईंको म्याकलाई व्यवस्थित राख्नुहोस्।
- अलार्महरू, हाम्रो tinyalarm अनुप्रयोगबाट, अब आईलकमा छ।
- मिनीकलेन्डरसँग यसमा UI सुधारिएको थियो र केही फिक्सहरू पनि थिए।
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। यदि तपाइँसँग सुझाव छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
- क्यालेन्डर अब विन्डो विस्तार गरेर १ महिना देखि १२ महिनासम्म बढ्न सक्दछ।
- Ui र पूर्वनिर्धारितमा बढी परिवर्तन
- ui परिवर्तन गर्दै।
- नयाँ फाईल 'टेक called' भन्ने नाम थप्दै।
- समय मेनूमा आईपी ठेगानामा फिक्स्ड चेक
- सबै चलिरहेका अनुप्रयोगहरू अनुप्रयोग मेनूमा देखिन्छन्। भर्खरको फोल्डरले भर्खरै खोलिएका अनुप्रयोगहरू र प्रणाली प्रिफ्स फोल्डरहरू देखाउँदछ।
- नयाँ संस्करण अब पुरानो दर्ता जानकारी पढ्छ।
- यद्यपि यो आइकलोकको पुन: लेखन र नयाँ संस्करण हो, हामी यसलाई यसलाई पछिल्लो संस्करणबाट फरक बनाउन 3.0.० भन्न गइरहेका छौं।
- नयाँ प्रिफ बनाउनुहोस् जसले अनुप्रयोग आइकनलाई डकमा लुकाउन अनुमति दिन्छ।
- ui प्रिफ प्यानल को लागी सुधार गरीयो
- प्रगतिमा asm मेनू विस्तार गर्न जारी राख्नुहोस्
- मेनूबारमा समयको अग्रणी ० छ
- आईपी नम्बर काम गर्दछ
- tinyalarm अब आइलकमा
- प्रजातिमा आइकनमा टिनीकल
- स्पार्कल (अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्) aop मा अपग्रेड। अर्को संस्करणमा काम गर्दछ।
- आइलकले समयक्षेत्रमा परिवर्तनहरू लिन्छ।
- UI परिवर्तनहरू
- क्यालेन्डर अर्को संस्करणमा tinycal द्वारा प्रतिस्थापित हुनेछ।
- अन्य धेरै साना फिक्सहरू।
- अधिक चाँडै आउँदैछ।
यदि तपाईं म्याक अनुप्रयोग स्टोरमा खरीद गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, आईकलॉकसँग २ संस्करणहरू उपलब्ध छन्।
२ हप्ताको लागि निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि सदस्यता लिनुहोस् - १ 14 दिनको लागि नि: शुल्क ०.0.99 / / महिना सदस्यता
सशुल्क संस्करण किन्नुहोस् - समान $ १.18.00.०० मूल्य हाम्रो स्टोरबाट खरीदको रूपमा।
दुबै ठ्याक्कै कार्यात्मक रूपले यस्तै प्रकारको हुन् जुन यहाँ प्लम आश्चर्यजनकमा उपलब्ध छन्। Of०% मूल्य एप्पलमा जान्छ। कहिलेकाँही यसले एप्पल द्वारा जारी गरिएको संस्करण प्राप्त गर्न हामीलाई केहि दिनहरू लिन सक्दछ।
यदि तपाई पुरानो ओएसको साथ पुरानो म्याकको लागि आईकलॉक खोज्दै हुनुहुन्छ भने सबै पुरानो संस्करणहरूमा लिंकहरू छन्। तपाईको लागि परिवर्तन बदलि हेर्नु आवश्यक पर्दछ तपाईको लागि कुनले राम्रो काम गर्न सक्छ भनेर पत्ता लगाउन। परिवर्तन लग यहाँ छ:
Of मध्ये 4.5. m चूहों, म्याकवर्ल्ड, अप्रिल २०२०
"ICock समीक्षा: आश्चर्यजनक बहुमुखी, सुपर अनुकूलन म्याक मेनू बार घडी। अधिक अनुकूलनयोग्य, पूर्ण-विशेष अनुभवको साथ मानक macOS मेनू पट्टी दिन र समय प्रतिस्थापन गर्दछ। " - JR Bookwalter, Macworld, अप्रिल 13, 2020
"म्याकका लागि आईकलॉक: एप्पलको आधारभूत मेनू बार घडीको लागि अत्यन्त शक्तिशाली प्रतिस्थापन। आईकलोक, सब भन्दा पुरानो म्याक अनुप्रयोगहरू, पूर्ण रूपमा ग्राउन्ड अपबाट पुन: लेखिएको छ र म्याकोस मोजाभे १०.१10.14.4.। को लागि अपडेट गरिएको छ। यसको आधुनिक, उत्पादकता-बृद्धि गर्ने समय व्यवस्थापन उपकरणहरूको साथ, म्याकोसमा एप्पलको स्पार्टन क्लकको लागि उपयुक्त प्रतिस्थापन भन्दा आईकलोक बढी हो। ” - क्रिश्चियन जिब्रग, iDownloadblog, अप्रिल 25, 2019
"iCock zeigt sich als vielseitiger Ersatz für die von Apple Seit rund 35 Jahren kaum veräenderte Standard-Uhr in der Menüleiste von macOS। "
- क्रिस, iFun.de, २ Ap अप्रिल २०१ 25
अनुवाद:आईकलॉक मानक घडीको लागि बहुमुखी प्रतिस्थापन हो भनेर प्रमाणित गर्दछ जुन एप्पलले करीव 35 XNUMX बर्षमा म्याकोसको मेनू पट्टीमा परिवर्तन गरेको छ। " - क्रिस, iFun.de (जर्मन म्याक पत्रिका), बिहीबार, २ Ap अप्रिल २०१ 25
"यदि तपाईं म जस्तै म्याक गीक हुनुहुन्छ र एउटा घडी चाहिएको छ जसले सबै गर्छ भने एप्पलले तपाईंलाई सहयोग गर्दैन। आईकलॉक गर्न सक्छ। यो क्यालेन्डर, अलार्म, chimes र सतर्कता, र विश्व घडी क्षमता को लागी समयक्षेत्रको साथ सबै भन्दा अनुकूलन मेनू पट्टी घडी हुन सक्छ ... iCock को मजबूत सेटिंग्स र विकल्पहरूको साथ आफ्नो म्याक geek मा प्राप्त गर्नुहोस्। " - टेरा थॉमस ओ ब्रायन, टेराटाक्स,1 / 21 / 19
"आईकलॉक केवल अधिक उपयोगी र शक्तिशाली मेनूबार घडी हो। यो प्रयास गर्नुहोस् र तपाईले चाँडै यो जान्नु हुनेछ कि किन यो मेरो मनपर्ने अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। " - मार्सेल डुफ्रेस्ने, बाट उद्धरण दक्षिणी ओंटारियो न्यूजलेटरको म्याक प्रयोगकर्ताहरूनोभेम्बर २०१
"घडी प्रो वास्तवमा 'आवश्यक म्याक मेनूबार घडी' हो। यो 'समय टाइम हब' को रूपमा वर्णन गरिएको छ जसले म्याक ओएस एक्स घडीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ धेरै धेरै उपयोगी मेनूहरू, विकल्पहरू र अनुप्रयोगहरू जुन प्रत्येक दिन दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छ। ' त्यो वास्तवमै एक धेरै महत्त्वपूर्ण अधोरेखित हो। यो कार्यक्रममा समावेश सबै सुविधाहरू साँच्चै आश्चर्यजनक छ, जस मध्ये धेरै मलाई थाहा थिएन कि मलाई आवश्यक छ, तर अब बाँच्ने छैन! मेरो दैनिक म्याकको प्रयोग अब धेरै सुधार भएको छ, उत्पादकतामा यस सानो लगानीको लायक। ”
- टम पाइपर, एप्पलजेक - //२//१।
"यो एक शानदार कार्यक्रम हो।"
- म्याकब्रेक २261१ मा लियो ल्यापोर्टे
"iCock समय बचाउँछ! फेरि एकपटक मैले प्लम अमेजिंगबाट एक अमूल्य उपकरण छेकें। आई-लकले राम्रोसँग कार्यक्षमता र सुविधाहरूको सही सन्तुलन प्रदान गर्दछ। खुदाई छैन - कुनै ब्लोट छैन; मेरो घडी, मेरो समय, मेरो म्याक प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि केवल एक आश्चर्यजनक सरल उपकरण।"
- रान्ड मिलर, Myst र Riven को सह-निर्माता
"मैले आइकलो कोसिस गरें किनभने म बारमा मिति देख्न असमर्थ भएँ। जब म यसको लागि भुक्तानी गर्न गएको थिएँ, मैले कॉपिपास्ट याद गरें र यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें किनभने मँ अक्सर अलि प्रशंसक प्रतिलिपि गर्न चाहान्छु। म शायद अधिक उन्नत विकल्प प्रयोग गर्दिन, तर म साधारण चीजहरू राम्रोसँग चलाउन चाहान्छु। धन्यवाद एड - डा। एडवर्ड क्याटमुल, पिक्सरका सह-संस्थापकहरू मध्ये एक। उहाँ पिक्सरको अध्यक्ष र सीटीओ हुनुहुन्थ्यो र अब वाल्ट डिस्ने र पिक्सर एनिमेसन स्टुडियोका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
"मेरो कामको रेखाको साथ, मलाई कहिले पनि थाहा छैन कि मेरो जागिरले मलाई संसारको कुन कुन कुनामा लैजान्छ। आईकलॉकको सरल, सहज ईन्टरफेसले मलाई कहिले निराश तुल्याउँदैन। पुल-डाउन मेनूमा द्रुत हेराईका साथ, मँ म कस्तो स्थानमा छु भनेर म हेर्न सक्छु।… जहाँ म जाँदै छु… र जहाँ गएँ। अर्को क्लिकको साथ, म मेरो अर्को गन्तव्यमा मौसम जाँच गर्न सक्दछु। यो म्याकको लागि डिजिटल टाइमपीस भन्दा यति धेरै छ। ” - केभिन राफर्टी, दृश्य प्रभाव सुपरवाइजर "फ्यान्ट्यास्टिक फोर: सिल्वर सर्फरको उदय", "स्टार वार्स: एपिसोड I - फ्यान्टम मेनरेस", "दि लस्ट वर्ल्ड: जुरासिक पार्क" र अन्य धेरै चलचित्रहरू।
"यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि यति धेरै कार्यक्षमता 'घडी' मा प्याक गर्न सकिन्छ!" - गाय कावासाकी, लेखक, ब्लगर, ईभान्जलिस्ट, र उद्यमी।
"धेरै धन्यवाद। राम्रो अनुप्रयोग! ” -डेभिड बोगार्ट, कार्यकारी VP र COO, ओन्टारियो इनोवेशन ट्रस्ट
"नयाँ आईकलॉक उत्कृष्ट छ र यो धेरै स्थिर छ। मलाई बिभिन्न साइटहरूमा ती सबै लिंकहरू मनपर्दछ। मलाई पनी सजिलैसँग बारमा हेराई गर्न सक्षम हुनु र दिन र मिति हेर्नको लागि प्लस म ड्रप डाउन क्यालेन्डर सुपरमा उपयोगी देख्छु जुन यसले क्यालेन्डर वस्तुहरू सूचिकृत गर्दछ। उत्कृष्ट! " - केरी डसन
"मसँग भएको उत्तम समय !!!!" - चार्ल्स हेनरी, PanTech Inc.
"मलाई आईकलोक मन पर्छ। यो केवल आकर्षक डिजाइन गरीएको छैन, वास्तवमै उपयोगी पनि छ। यसका सबै सुविधाहरू बाहेक, मैले खुल्ला अनुप्रयोगहरूको लागि ड्रप डाउन मेनू पुनर्स्थापित गरेको देख्दा म खुसी भए। ” - जेम्स हेनरी रुबिन, प्राध्यापक र अध्यक्ष, कला विभाग, न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय
"आईकलोकमा मलाई आकर्षित गर्ने सुविधा स्थान समय मेनू थियो। तपाईंलाई थाहा छ सफ्टवेयर बिक्री इन्टरनेटको कारण विश्वव्यापी छ। जब मलाई विदेशमा सेवा कल गर्न आवश्यक हुन्छ म यो देशको कुन बेला हो भनेर जान्नु आवश्यक छ। मैले अन्य उत्पादनहरू प्रयोग गरें जुन समयहरू हेर्नको लागि प्रोग्राम चलाउन आवश्यक पर्दछ, वा सफ्टवेयर जसले डेस्कटपलाई क्लकहरूसँग क्लटर गर्दछ। आईकलॉक सरल, गैर-बाधा र छिटो छ। कार्यक्रम को उपयोग गर्न को लागी धेरै उपयोगी तर धन्यवाद को लागी धन्यवाद। " - डेभिड पेरिश
"IClock अद्भुत छ! तपाईंले वास्तवमै एप्पललाई ती सबै मेशिनहरू समावेश गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ! मलाई खुशी लाग्यो कि मैले फेला पारे। धन्यवाद! " - जोन किंगडन
“म अहिले iCock बिना बाँच्न सक्दिन। मलाई यो मनपर्दछ किनकि यो धेरै सरल छ, तर यती धेरै शक्तिशाली सुविधाहरू छन्। यसले के गर्न सक्दछ भनेर म निरन्तर छक्क पर्छु। ” - अनिल के सोलंकी
"म एक हेम रेडियो अपरेटर हुँ र म केवल अरूलाई जान्न चाहन्छु कि iClock2हम्सको लागि उपयोगी NW सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। नयाँ २.० संस्करणले उपयोगी वेब लिंकहरूको साथ धेरै अन्य उपयोगी सुविधाहरूको साथ समर्थन गर्दछ जुन एचएएम अपरेटरहरूको लागि धेरै राम्रो उपकरण बनाउँदछ। म समय रूपान्तरणको लागि iCock प्रयोग गर्दछ, मिति खोज्नको लागि एक द्रुत कलेन्डर (iCal सुरुवात गर्दछ जब तपाईं केहि प्रविष्ट गर्न चाहानुहुन्छ), अलार्म, स्टक र अधिक। एक महत्त्वपूर्ण नोट मार्क फ्लेमिंग हो लेखक अन्य लिंकहरूमा रुचि राख्छन् हेम्स उपयोगी हुन सक्छ। " - स्टीव हेलीयर
"आईलकल्ट स्विस आर्मी चाकू भन्दा गुलाबजस्तो छ: हरेक पटक मैले कुनै कुराको प्रशंसा गरे, त्यहाँ तल अर्को थियो।" - ग्राहम के रोजर्स, समीक्षा एक्सटेन्सनहरू, 2004
"आफन्तहरू, साथीहरू, र विभिन्न समय क्षेत्रहरूमा अवस्थित व्यवसाय साझेदारहरूसँग बढ्दो सञ्चारको लागि, तपाइँलाई तिनीहरूको स्थानीय समय सामान्य माउस क्लिकको साथ हेर्न मनपर्नेछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, यो मैले प्रयोग गरेको सब भन्दा उत्तम सुविधाहरूमध्ये एक हो र म यसलाई सिफारिस गर्दछु। ” - म्याकगुइल्ड, २०० 2005, समग्र मूल्या Rating्कन M १/२ मध्ये १ माईस
"यस उत्पादनको धेरै ठूलो प्रयोगहरू छन्, जस मध्ये धेरै आफैंले $ २० लाई मूल्यवान्दछन्। दिनभरि म्याकको प्रयोग गर्ने जो कोहीले पनि यो उत्पादन जाँच गर्नुपर्नेछ, किनभने उनीहरूले यस "सबै चीज बाहेक किचन सिन्क" युटिलिटीमा धेरै वस्तुहरू भेट्टाउँछन् जसले यसलाई सार्थक खरीद बनाउँदछ। " म्याकटेक - 2006
"यो शेयरवेयर शुल्कको प्रत्येक पैसाको लायक छ।" - डेभीड हप्ता, 2006